शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय किन पार्टीभित्रका नेताहरुसँग रुष्ट भए ? « Np Online TV
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय पार्टीभित्रका नेताहरुसँग रुष्ट छन्।
बेग्लै गुट चलाएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग बेलाबखत रुष्ट देखिने देउवा अहिले केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालासँग ‘वाक् युद्ध’ मा छन्।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनमा सभापति देउवाले राखेका अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको कोइरालाले बताएका हुन्। सभापतिमा राजनीतिक संस्कारको खडेरी भएको आरोप कोइरालाको छ।
सभापति देउवाले चुनावमा पार्टी हारको जिम्मेवारी आफू एक्लैले लिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। पूर्वमहामन्त्री सिटौला, नेता अर्जुननरसिंह केसीलगायतका आलोचनात्मक कुरा सुनेपछि देउवाले हारको जिम्मेवारी एक्लैले होइन सिंगो पार्टीले लिनुपर्ने दोहोर्‍याएका थिए।
देउवाले कार्यक्रममा पार्टीभित्रका आन्तरिक कुरा पनि खोले।
‘पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ। तर यहाँ दुश्मनी हुन थालिसक्यो। बोलचाल नै बन्द भइसक्यो,’ देउवाले भनेका छन्, ‘कांग्रेसले कांग्रेसलाई नै हराउने गरी अन्तरघात भएपछि कहाँ चुनाव जित्न सकिन्छ?’
आफ्नो आलोचना हुने गरेकोमा देउवाले पार्टीभित्र विगतमा भन्दा अहिले प्रजातन्त्र आएको भन्दै व्यङ्ग गरेका थिए। ‘गिरिजाबाबु, सुशील सभापति हुँदा चुइँक्क बोल्न नसक्नेहरु अहिले बोल्न पाएका छन्। प्रजातन्त्र आयो नि,’ आफ्नो आलोचना गर्नेलाई लक्षित गर्दै देउवाले भने।
एकअर्कालाई गाली गरेर चुनाव नजितिने भएकोले संगठन विस्तारका काम गर्न पनि देउवाले आग्रह गरे।
भने, ‘एकअर्कालाई गाली गरेर केही हुन्न चुनाव जित्ने गरी काम गर्नुहोस्।’
सभापति देउवाका अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्कार र नैतिकताअनुसार नभएको केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले शनिबार एक कार्यक्रममा खण्डन गरेपछि सभापति र नेताबीच दुरी बढेको कुरा फेरि सतहमै आएको छ।
कांग्रेस चितवन-काठमाडौं सम्पर्क समितिले गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचना गरे।
सभापति देउवाले पार्टीलाई तदर्थवादमा लैजाने कोशिस गरेको आरोप उनको छ।
‘चार जनाले तरुण दल हाँकिरहेका छन्, पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेविसंघ नेतृत्वविहीन भएको महिनौं भइसक्यो। यसरी तदर्थवादमा भातृ संगठन र पार्टी चलाउन हुँदैन।’
गाउँदेखि वडासम्म इकाइ नै नबनेको अवस्थामा कसलाई जागरुक बनाउन राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने भनेर कोइरालाले प्रश्न गरे। कोइराला एक महिनाका लागि जागरण अभियान चलाउन काभ्रे खटिएका छन्।
कार्यकर्तालाई भन्दा जागरण झगडा गरिराख्ने नेतालाई चाहिएको उनको भनाइ छ।
‘जागरण कसलाई चाहियो? नेतृत्वलाई, हामीलाई कि तपाईंहरूलाई?,’ कोइरालाले कार्यकर्तालाई सोधे, ‘तपाईंहरू त यसै जागरुक हुनुहुन्छ। झगडा गरिराख्ने हामीलाई जागरण चाहिएको हो।’
सभापति देउवाले पार्टीभित्र बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था रहेको बताएकोमा नेता कोइरालाले यसरी जवाफ दिए, ‘म त गुटमा विश्वास गर्दिनँ। सभापति भएर गुट चलाउने? अझै बोलचाल गर्ने वातावरण छैन भन्ने? सभापतिले बनाउनुपर्‍यो नि बोलचाल गर्ने वातावरण।’
कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराउँदै गएको पनि उनले बताए। जागरण अभियानका बेलामा पार्टी हितविपरीत कसैले बोले अनुशासन समितिमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन भन्दै कानून व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा पनि कोइरालाले फरक मत राखे।
भने, ‘कांग्रेसभित्र यस्तो काम लोकतन्त्र विरोधी हो।’
नेताको आलोचना गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेताका आलोचना नगर्ने हो भने कांग्रेस कस्तो लोकतन्त्र चाहन्छ?,’ उनले भने, ‘गाउँमा गएर कम्युनिष्टको विरोध त गर्नु नै छ। यसमा कुनै शंका छैन। तर हामी कांग्रेसीकै बीचमा बोलचाल हुन सकेन भने कसलाई जागरुक बनाउने?’उनले पार्टीलाई तदर्थवादबाट बाहिर निकाल्न छिटो १४ औं महाधिवेशनको तयारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए।